Fanatsarana ao an-trano: Inona no ho fantatra alohan'ny hanombohanao ny fantsom-pisakafoanana ao an-dakozia, ny fantsom-boaloboka famenoana, ny fandroana fandroana | WOWOW
Home / Interior design / Fanatsarana trano: Inona no ho fantatra alohan'ny hanombohanao
2020 / 09 / 23 FisokajianaInterior design 6230 0
Fampiroboroboana ny trano: Inona no ho fantatra aloha kokoa noho ianao manomboka
Raha mientanentana amin'ny firakotra trano ianao, ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao fatratra. Ny tolo-kevitra omena eto dia hampiseho aminao ny fomba hanombohana asa fitoriana vaovao na hanatsara ny iray teo aloha.
Tsy ny iraka fampiroboroboana trano tsirairay avy dia tokony ho fanovana matotra na fandaniana matotra; misy safidin'ny fanavaozana haingana sy tsotra azonao atao amin'ny vidiny tsy lafo koa mba hahafahanao manampy lanja sy manintona ny tranonao manokana. Atombohy amin'ny loko. Lokoy ny fizarazaranay, ny lalimoanao, ny akanjonao na ny vavahadinao. Azonao atao koa ny mandoko ny faritra misy anao na ny gorodonao amin'ny loko manokana natao ho an'io asa io. Ampitomboy ny toerana misy ny vata fampangatsiahana amin'ny alàlan'ny fametrahana mpikarakara arimoara na pantry. Mifanakaloza bokotra boaty lakozia mankaleo miaraka amin'ireo izay mety ho miavaka sy haingo. Raha mbola eo ianao, dia ataovy mitovy amin'ireo takelaka misy anao fotsy fotsy ireo. Hatsarao ny asan'ny loko vaovao ataonao amin'ny ambainy sy akanjom-pahazavana vao haingana. Manakarama buffer amin'ny gorodona, ary alao ary ampio ny gorodonao. Ny vola kely sy ny fahaiza-mamorona dia mety hitarika fanovana sasany.
Ny fisafidianana ny loko loko tsara indrindra ho an'ny efitrano iray dia zava-dehibe. Ny loko dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahatsapanao raha tafiditra ao anaty efitrano ianao. Ny fandokoana mangatsiatsiaka dia hampitony anao, fa ny hafanana kosa dia afaka manome hery anao. Raha mampiseho trano kely ianao dia ampiasao loko miloko satria hampitombo ny efitrano io. Raha toa mampijaly ny trano dia ampiasao fandokoana hafanana mba hahatsapany tena ahazoana aina.
Mampiasà kaontenera fonosana kiraro teo aloha ho fitahirizana. Azonao atao ny mamorona endrika tsara amin'ny alàlan'ny fampidirana ny sary an-tsaina sisa tavela, ary na dia ny fitaovana aza, ho toy ny canopy amin'ireo fitoeram-panangonana kiraro teo aloha. Mety ho fomba tsara ity mba hanampiana tantara an-tsehatra ao amin'ny efitranonao, ankoatry ny valiny fitehirizana mahafinaritra.
Esory ny varavarana iray amin'ny vatany ary esory ny visy ao anaty savily. Tsy maintsy mamoaka varavarana ianao mba hahafahanao mamindra fanaka goavambe? Ny sisa ataonao dia ny mamily fantsika amin'ny alàlan'ny barika ambanin'ny fantsom-panafody ka mivoaka ny avo indrindra avy hatrany ny pin. Andramo isaky ny savily ity ary maimaim-poana ny varavarana!
Hevitra tsy manam-paharoa ho an'ny fanananao manokana ny tranonao manokana. Ny ankamaroan'ny olona dia maniry ny handravaka ny tranony ary hanao fanatsarana mifanaraka amin'ny fomba fiainany, na izany aza, isaky ny manakarama ianao dia mety maniry hangataka alalana mba hahazoana antoka fa fanatsarana. Tsara kokoa ny manao izany amin'ny fanananao manokana, satria tsy misy dikany ny mandany vola 1000's dolara hanatsarana ny fananan'ny olona iray hafa.
Rehefa te-hanova hidin-trano iray dia miezaha manova ny fivoriana iray manontolo na ny varingarina fotsiny. Ny antsasany izay manao fanidiana dia varingarina. Raha te-hifanakalo hidin-trano ianao amin'ny fiarovana, afaka mifanakalo varingarina fotsiny ianao. Ampifamadiho ny valizy mihidy raha mitady hanova ny fijerin'ny varavaranao ianao.
Misafidiana henjana modely. Aza manararaotra mampiasa lamina matanjaka loatra amin'ny faritra kely; Mifanohitra amin'izany, ny fampiasana endrika mahasahy ao amin'ny efitrano goavambe iray dia hahatonga azy io ho cozier kokoa. Tsy mampiasa sary modely mihintsy ianao raha manana karipetra na firakofana varavarankely. Ho an'ny efitrano iray feno zoro sy fialan-tsasatra mahasosotra, manapa-kevitra amin'ny sary an-tsary miaraka amina endrika tsy dia mifanaraka amin'ny sain'ny olona. Izany dia afaka manampy amin'ny manafina izay tsy fahalavorariana ao anaty fizarana.
Amboary ny fantsona mitete ao an-tranonao. Ny rano lany avy amin'ny famoahana dia afaka manampy be dia be ny galona iray isaky ny 12 volana, ka mahatonga ny faktiora rano manaraka ho anao ary fandaniam-poana loharano tena ilaina. Ny fanitsiana ny fivoahana dia mety ho tsotra toy ny fanovana fanasan-damba, noho izany dia tsy misy ny antony manosika ny tsy hanao izany firavaka mora ao an-tranonao izany.
Raha sanatria ka misy rano mivoaka avy any an-tampon'ny faucet anao dia misy fomba roa ahafahanao mamaha ity drawback ity. Miezaha aloha manamafy ny voanjo. Ny voanjo dia mitazona ny spindle an'ny faucet amin'ny toerany. Raha tsy mandeha izany dia miezaha hanakalo ny tombo-kase vita amin'ny rubber amin'ny spindle, izay antsoina koa hoe O-ring.
Karakarao haingana ny teboka fikolokoloana raha vao tonga izy ireo. Raha sendra manana mpanofa ianao mitaraina amin'ny fantsom-panafody mitete, na heater izay eo an-tampon-tanety, tsy azon'izy ireo atao ihany ny mitazona ny karama mandra-pahatonganao manamboatra azy, na izany aza, ny fahavonona dia mety ho lafo kokoa raha misy fahavoazana hafa mitranga.
Ny borosy nify teo aloha dia azo ampiasaina hanadiovana ny tranonao. Ny borosy nify teo aloha dia mahafinaritra amin'ny fanadiovana ny sera sy ny helo boribory. Malalaka koa izy ireo. Tsy misy tsy maintsy mividy maodely vaovao amin'ny fotoana rehetra, rehefa mila mampiasa varotra maimaimpoana izay mahomby fotsiny ianao. Atokana ho azy ireo vola ireo amin'ny olana samihafa.
Tsy maintsy averina amin'ny laoniny ny fivoahan'ny faucet. Ity olana ity dia mety hiverina tsy ho ela ao anatin'ny fihemorana lehibe, ary mety ho lafo izany. Ho fanampin'izay, raha avela hilatsaka matetika ny rano, dia mety handoto ny endrika porselana izy io ary hanimba ny cupboard sy ny kaontera. Ny fanovana grillet amin'ny ankapobeny dia asa somary tsotra. Na izany aza, tsy izany no fanamboarana na fanovana ireo olana tapaka.
Eto dia misy tendrony mahatalanjona hanafoanana ny fananganana mineraly ao anaty paompy. Mamorona ranona voasarimakirana sy vinaingitra fotsiny ary mamono ny tampon'ny paompy ao anaty fitambarana. Ny fampifangaroana dia handrava ny fananganana mineraly ary hamono ny rano mandreraka izay mety ho avy amin'ny lohan'ny paompy.
Hatsarao ny heater-dranoo amin'ny karazana tankless ho an'ny rano mangatsiaka tsy tambo isaina ary ahena ny fandoavam-bola. Ara-dalàna raha oharina amin'ny fanamafisana rano amponga be dia be, ireo rano an'efitra ireo dia mamindro satria mandalo amin'ny heater izy io, izay mora kokoa amin'ny tontolo iainana noho ireo mpanafana rano amin'ny tanky. Azonao atao ny misafidy amin'ny heaters amin'ny trano iray manontolo, na ireo izay tokony hanome rano amin'ny efitrano na faucet iray farafaharatsiny.
Rehefa manatsara ny trano ianao dia mila mandinika ny paomponao manontolo raha misy fivoahana. Ny fantson-drano mitete iray dia mety handany rano be. Raha sendra mankany anaty faucet mitete ianao dia ataovy izay hamerenanao azy io haingana araka izay tratranao. Raha manasa ny fitafianao ianao dia miezaha mampiasa rano mangatsiaka. Azonao atao ny mandray an-tsoratra ny fametahana loha fandroana ambany, izay afaka mampihena ny habetsaky ny rano ampiasaina.
Fohy, afaka manana fotoana kely ianao handinihana sy hamantarana momba ny fanamboarana trano. Na dia mitaky somary kely aza ity resaka ity dia tsy tokony avelanao hisavoritaka ny tenanao. Miorina voalohany amin'ny raharaham-pirenenao mazava, ny valinao dia miankina amin'ny olana mety ho tadiavinao ny haminavina.
Previous :: Fanavaozana ny valizy izay mahazaka ora hanamarinana ny fotoana »Gazety Borneo Bulletin On-line Next: 5 manome lova tsara indrindra any Austin 🥇
2020 / 12 / 12 1741
2020 / 12 / 05 2069
2020 / 11 / 29 2303
2020 / 11 / 29 2975
2020 / 11 / 29 2953
2020 / 11 / 29 2606